Inona no atao hoe art art: famaritana, toetra sy mpanakanto ny teknika | Famoronana an-tserasera
Concept Art, Concept Art na Concept Art dia zavatra mitovy. Izy ireo koa dia azo antsoina hoe fivoaran'ny sary ary miroborobo. Ny fampivelarana ny tetikasa, indrindra ireo izay mifandraika amin'ny lalao video, andian-tsarimihetsika na sarimihetsika mihetsika dia ampiasaina mba hanatonana ny fomba voalohany amin'ny "ny fomba fisehoany sy ny fahatsapany" izay voasoratra.
fa, Inona no atao hoe art art? Inona no tombony ananany? Ahoana no anaovanao azy? Raha manontany tena ianao ary te hahazo valiny amin'ireo fanontaniana rehetra ireo, sy ny sasany hafa, dia hanampy anao hanazava ny hevitrao izahay.
1 Inona no atao hoe art art
1.1 Art sy sary an'ohatra
2 Ahoana ny fomba anaovana ny kanto hevitra
3 Ahoana no fomba hahatongavana ho matihanina momba ny zavakanto
3.1 Fahalalana kanto
4 Mpanakanto zavakanto mpiorina
Ny kanto Concept dia ampahany amin'ny zavakanto hita maso. Azo faritana ho fifehezana izay tompon'andraikitra amin'izany mamaha ny olana mitantara sy ny hatsarana. Ary noho izany dia mampiasa ny singa hita maso izy io. Raha atao teny hafa, dia fanehoana maso ny hevitra amin'ny lafiny endri-tsoratra, toerana, singa sns. izay efa ananan'ny olona iray na ekipa iray.
Tombatombana voalohany amin'ny endrik'ireo singa rehetra ireo ireo ary avy eo "manome" azy ireo fiainana amin'ny alàlan'ny effets visuels.
Art sy sary an'ohatra
Tokony ho tadidinao fa tsy mitovy ny kanto sy ny fanoharana na dia eo aza ilay voalohany. Amin'ny ankapobeny, ny kanto hevitra dia fanoharana, na amin'ny endri-tsoratra, na toerana, na fitaovam-piadiana ... Nefa samy hafa ny fiasany noho ilay sary. Na izany aza dia mikendry ny hitantara tantara iray, miaraka amin'ireo toetrany, ny drafitra misy azy, ny tontolo iainany; raha ny zava-kanton'ny foto-kevitra dia kisarisary fotsiny momba ny fomba hivoahan'ny zavatra, tsy misy hafa. Saingy tsy azo ampiasaina izy io; Mila miasa eo ianao mba hanomezana azy io "esents" io.
Amin'ny teny hafa, dia fanatonana voalohany ny amin'izay ho valiny farany, fomba iray hanaovana izay namboarina ho zava-misy. Fa kosa, ny fanoharana izay horesahintsika momba ny valiny farany.
Ahoana ny fomba anaovana ny kanto hevitra
Raha nanontany ny tenanao ianao roapolo taona lasa izay, dia holazainay aminao fa, mba hamoronana art art, ny pensilihazo sy taratasy ary sary an-tsaina mahafinaritra fotsiny no ilainao. Saingy ankehitriny, miaraka amin'ny teknolojia vaovao, ny marina dia tena ilaina ny programa fanovana sary hanatanterahana an'io karazana fanehoana zavakanto io.
Ireo singa toa ny 3D, ny famoronana, ny fandikana, ny Zbrush ary ny hevitra hafa Mety tsy ho toy ny sinoa izy ireo aminao, fa izy ireo no ho "mofo isan'andro" amin'ny asanao.
Ho fanampin'izay, tsy maintsy jerenao fa, ao anatin'ny kanto hevitra, misy singa roa lehibe (raha ny marina betsaka kokoa, fa ny roa no be mpahalala indrindra):
Famolavolana scenario. Ireo no toerana hisehoan'ny toe-javatra manandanja amin'ny asa. Noho izany dia ilaina ny manisy antsipiriany amin'ny antsipiriany kely indrindra mba hahitanao ny fomba fitambaran'ny toerana iray manontolo sy ny fihetsem-po ampitainy. Noho io antony io dia tena zava-dehibe ny teknika toy ny fomba fijery, loko, jiro ary aloka, satria miaraka amin'izy ireo ireo singa na ampahany amin'ilay «haingo» izay miavaka.
Famolavolana toetra. Mba hamoronana azy ireo dia mila mahatakatra azy ireo ianao. Tsy ny vatan'ny tarehin-tsoratra ihany no zava-dehibe, fa ny ao anatiny koa mba hahafahana misolo tena ivelany ireo toetra mamaritra ny endri-tsoratra. Ny tanjona? Miteraka fangorahana izy ireo. Mba hahafahana mamorona azy ireo tsara, tena zava-dehibe ny fahalalana ny anatomin'ireo tarehin-tsoratra ireo, ary koa ny endrika tarehin'izy ireo. Ary tsy olombelona ihany no resahina fa ny biby koa ny zavamaniry.
Ireo mpanakanto mpikirakira ny tenan'izy ireo ihany koa dia mamporisika ny hananan'ny mpamorona fahaiza-mitantara sasany. Afaka ny ho olona manao sary tsara ianao, fa raha tsy omenao tantara ny sarinao, fomba iray hahatakaranao ireo sary asehonao ireo, na ny toe-javatra iray ao aminy, dia mamoy ny ainy izy ireo ary tsy mijanona ho fanoharana fotsiny.
Fa kosa, ny kanton'ny hevitra dia mamorona fototry ny tantara.
Ahoana no fomba hahatongavana ho matihanina momba ny zavakanto
Raha mpamorona sary ianao, na tianao ny manao sary, azo heverina fa ny konsep art dia foto-kevitra mahasarika ny sainao, indrindra satria manokatra varavarana maro ho anao izy io. Na izany aza, raha te hahomby dia ilaina ny manana singa sasantsasany eo ambanin'ny fehikibo mba hiavaka amin'ny hafa. Ireo dia:
Ilaina tokoa ny fahafantaranao izay azo atao rehetra (sy bebe kokoa) momba ny sary, sary, teknika, fitsaboana, endrika ... Raha fintinina, afaka manana fototra kanto ianao.
Mazava ho azy, tadidio fa, Rehefa mandroso isika dia misy teknika vaovao, fomba fanoritana sary vaovao izay tsy maintsy ianaranao ihany koa. Raha tsy izany dia hiafara amin'ny lany daty ianao ary hahatratra anao ireo vaovao.
Noho izany, tsy maintsy mahafehy ireo hevitra rehetra ireo ianao, na amin'ny fomba ankapobeny na manokana amin'ny 1-2, fa ho tsara indrindra amin'izany.
Ny fanananao izany fahalalana rehetra izany dia tsy midika izany ny famoronana no tena hampiavaka ny asanao. Ary hataony izany satria tsy manam-paharoa ny volavolanao, satria manome zavatra tsy azon'ny hafa ianao. Raha azonao atao ny manova ny hevitrao ho lasa zavakanto zava-misy sy mampiankin-doha ka tsy afaka mijery lavitra an'io sary io ianao dia afaka mahita fahombiazana.
Tsy hamitaka anao izahay. Mba hahombiazanao dia mila ampahafantaro ny tenanao ary misy asa be izany mialoha handondona amin'ny varavarana ankavanana. Manampy betsaka ny tambajotra sosialy. Izany no antony handanianao fotoana hiasana amin'izy ireo, tsy ny fanantonana ireo endrika ihany, fa ny fametrahana fifandraisana amin'ireo orinasa mety ho liana ihany koa.
Raha ny amin'ny fandefasana ny tenanao raha mahita tolotra asa ianao, na mampiseho ny volanao amin'ny orinasa, bilaogy sns. Ary koa mba hamoronana zavatra izay tsapanao fa voafetra, na heverinao fa tsy ho mendrika tsara. Afaka manampy ny hoe mpandika lalàna mba hananana laza ho anao, raha mbola manaja fetrany tsy azo ivalozana ianao, mazava ho azy.
Mpanakanto zavakanto mpiorina
Alohan'ny handaozana ny lohahevitra dia mety ny mihaona amin'ireo mpanakanto izay tena vatosoa amin'ny kanto misy fotokevitra. Hain'izy ireo ny manamboatra kariera amin'ny asany, ny sasany mandeha lavitra. Avelantsika eto ny anaran'izy ireo.
Teraka tao Buenos Aires, Arzantina izy, ary mpiasa tsy miankina manampahaizana manokana amin'ny kanto hevitra, fa amin'ny fanoharana koa. Tsara be ny asany ka niasa orinasa toa an'i Gameloft, Timegate, Sabarasa ...
Ny endriny ahafahanao milaza fa efa nahazatra anao kokoa, ary mankafy bebe kokoa koa ianao, dia ireo izay manana lohahevitra steampunk, cyberpunk na post-apocalyptic.
Teraka tany Murcia, mipetraka any Madrid izy ankehitriny ary iray amin'ireo solontenan'ny zavakanto eritreritra indrindra. Raha ny tena izy, tamin'ny 2015 dia nahazo ny loka Velázquez ho an'ny zavakanto plastika izy.
Teraka tao Vitoria-Gasteiz, Álava izy, na dia mipetraka any France aza izy ankehitriny. Mpanakanto, mpanao sary, sns izy. ary raha ny kanto hevitra, io no iray amin'ireo tsara indrindra any Espana.
Amin'ity tranga ity dia mandeha any Kolombia izahay, izay i Juan Pablo Roldán dia misahana manokana ny kanto amin'ny haitao sy ny haitao fahagola. Embroider toy ny tsy misy an'ohatra ny sarin'ny dragona sy ny hetsika, Ary imbetsaka, ao amin'izy ireo dia feno hery ireo sketsa ireo ary hitanao ny fihenjanana amin'ny seho misy azy ireo.
Mikasika ny asany dia azontsika atao ny manasongadina ny lalao Bluepoint, Justice League, Halo Wars, Destiny 2, ...
Betsaka ireo mpanakanto mpiorina hevitra. Lazao anay raha te-hanome soso-kevitra iray ianao. Nanjary nazava kokoa aminao ve ny atao hoe art art?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Inona no atao hoe art art